Kugadzira minduro ye GPS yekutanga
SpotSOS inzimbo yekutsvaka yemberi
SpotSOS Inokupa Iwe Mikana Mizhinji. Ona Platform Yedu
Tanga Kutsvaka Zvinhu Zvako. Izvozvi!
Basa redu ndereGPS yekutsvaka pamasaisai zvenguva iyoyo. Iwe unogona kuongorora motokari ne zvimidhudhudhu zvenyu, kana vanhu. Chikwata cheSpotSOS
Inoshamisa chaizvo. Vanoshandisa zvigadzirwa zvedu vanofadzwa zvikuru, nokuti iri nyore uye inoshanda. Platform inoshamisa. Chikwata che SpotSOS
takabatana nema companies anoti
Ivai nekuongorora mashandiro ezvishandwa zvenyu
Ivai nekuongorora zvese- tevererai midziyo ne dzimotokari dzenyu parunhare penyu . Murikwamuri munoziviswa nzvimbo nemafambiro emudziyo wenyu uye nzira dzese dzinenge dzafambiwa nemuchairi wenyu. Mafambiro ese anoratidzwa pese pamunenge muchida.
Kuwana zvirinyore nekuongorora 100%
Kuongorora mudziyo wenyu zvizere
Munokwanisa kuwana ruzivo rwakakosha
Pamusoro pe zvirikuitika nezvaitika huongororo urwu hunopa nzira dzese dzafambiwa nepese pamiriwa pamudziyo woga woga. Munozvidzimikira nguva nehuwandu hwamunoda kuziviswa pakufamba kwemudziyo yenyu. Muenzaniso, munogona kuda kudzika kuti munoda kuziviswa panopera ma minute mashanu ega ega kama kanofambiwa chinhabwe chakatarwa chega chega.chigadzirwa ichi chino kwaniswa yananiswa nekukura kana kudupuka kwehushandwa.
Chigadezirwa chinokwanisa kuyananiswa munhu ari kwaari
Gonyo rinorira kana paita munhu ada kushandisa mudziyo zvisina kubvumirwa zvinova zvinobatsira mukudzoswa kana kutswagwa kwemudziyo
Wanai kuziviswa kana mudziyo wa pfuudzwa mubotererwa wamakarara kuti isashanda ichipfuura
WKana mubotererwa watarwa munowana kuziviswa netsamba parunhare rwenyu .munogona kusandura botererwa renyu pese pamunodira kubva parunhare rwenyu kanacomputer yenyu
Chakanakira kushandiswa zvese na nyamunhu kana company
With over 5000+ happy customers, SpotSOS is a complete platform for tracking vehicles and persons. A powerful site.
Munogona kuigadzirisa kuti ienderane nemi
Wanayi ruzivo rwakakosha kwamuri rwakafanana nekutambiswa kwenguva, hurefu rwemufambo, nepese panenge pamiriwa.munozvionera zvamunoda kuziva
Chigadzirwa ichi chakadziviridzwa zvekuti imi moga kana vamunenge matondera kushandisa vanokwanisa kuishandisa kana kurava. Ruzivo rwese runochengetedzwa nenzira inongokwaniswa kuonekwa nemi mega kana vamaka tondera
"Chigadzirwa chinodaira zvizere"
Munokwanisa kuongorora midziyo yenyu pa nhare dzese kana ma computer. Ruzivo nenzira kubva ku SpotSOS runowanikwa nguva dzose
munemubvunzo here ? Taurai nevatengesi vedu ,vanotarisira kunzwa kubva kunemi. Titumirei tsamba pa email tigokupai minduro musure memazuva maviri →
Garai muruzivo. SpotSOS Blog
Shandisai zvimbo iyoino kuvhura ma tracker enyu matswa. Taurai nesu!
Sunungukai kutibata chero nguva.Tinokupindurai nekukasika asi mushure me ma hour makumi maviri ne mana.
Zvekuziva pamusoro pedu
Zvitsva pa kero yedu yemumhepo